ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်များ နှင့် လှည်းတန်း ဗုံးခွဲသူမိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်များ နှင့် လှည်းတန်း ဗုံးခွဲသူမိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်များ နှင့် လှည်းတန်း ဗုံးခွဲသူမိ
Posted by ကထူးဆန်း on Jan 23, 2012 in Myanma News, News | 11 comments
http://www.facebook.com/thevoiceweekly မှကူးယူဖော်ပြပါသည် ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်များ
၁။ ၂၉၊၁၊၂၀၁၂ ထားဝယ်ခရီးစဉ်( နေ့ခြင်းပြန်)
၂။ ၄၊၂၊၂၀၁၂ မှ ၅၊၂၊၂၀၁၂ မန္တလေးခရီးစဉ် (တစ်ညအိပ်နှစ်ရက်)
၃။ ၇၊၂၊၂၀၁၂ ပုသိမ်ခရီးစဉ် (နေ့ခြင်းပြန်)
The Voice Weekly facebook စာမျက်နှာမျက်နှာတွင် တွေ့ရှိပါသည် ။
မန္တလေး ရွာသူား များ မသိသေးပါက သိနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည် ။
Flower News , Vol 8. No.4 မှာ စာမျက်နှာ ၅ မှာ ကျော်မြတ်ဇံ က
လှည်းတန်းဈေးအိမ်သာ ။ အငှားယာဉ် ပေါ် ဗုံးဖောက်ခွဲသူ နှင့် မြို့တော်ခန်းမတွင် ဗုံးတွေ့ရှိမိတို့၏ တရားခံများ ဖမ်းမိကြောင်းပါရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကတုံး(ခ)ဇော်သက်နောင် ၊အောင်ကိုမင်း၊အောင်ဇော်၊ နေမျိုးသူရအောင် လေးဦးကို အင်းစိန် စီအိုင်ဒီမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျှက်ရှိကြောင်း၊ ၄င်းတို့ လေးဦးကို ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့က မြ၀တီရဲ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တ်ို့ မြ၀တီမှာ ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သတင်းတပုဒ်မှာ ဖတ်လိုက်ရသလို ။
အဲ့ဒီ့ သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးမှာ ဘဲ ကျော်မြတ်ဇံက ဘဲ
ရန်ကုန်လေဆိပ်ကိုလည်း အငှားယာဉ် ငှားရမ်းပြီး ဗုံးခွဲရန် ကြံစည်ခဲ့သည့် အစီအစဉ် တွင် အကြံပေးခဲ့သော စာရွက်စာတန်းအထောက်အထားများကို သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းမှ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည် ဟု ဖတ်ရပါသည် ။ သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းမှာ ကတုံး(ခ) ဇော်သက်အောင်၊ အောင်ကိုမင်း(ခ) နေမျိုးသူရအောင် နှစ်ဦးကို စစ်ဆေးရာမှ ယခုကဲ့သို့ အထောက်အထား အချက်အလက်များကို သိရှိရခြင်းဖြစ်သည် ။သူတို့ အဖွဲ့ ကလေးဦး ၊လေးဦးထဲက အခုနှစ်ဦးက ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ အခြေစိုက်တဲ့ VBSW အဖွဲ့မှာ ဖောက်ခွဲရေးသင်တန်း များတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အပြင် သင်တန်းပို့ချခြင်းတွေကိုပါ ပြုလုပ် ခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးသိရှိရကြောင်း ၊ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ အခြေစိုက် စွမ်းအားမြင့် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့အစည်း(VBSW) အဖွဲ့ဝင်များ ဟုပါရှိပါသည် ။
(မှတ်ချက် …..စာကျန်သွားတာလား ၊ ဘာမှားလည်းတော့မသိဘူး ၊ ကိုကျော်မြတ်ဇံ တစ်ဦးထဲရေးတဲ့ သတင်းနှစ်ပုဒ်မှာ တစ်ပုဒ်မှာ အောင်ကိုမင်း နဲ့ နေမျိုးသူရအောင် တစ်ဦးစီလို ဖော်ပြထားပြီး နောက် တစ်ပုဒ်ကျတော့ တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ် ။ နောက် အိမ်သာ ဗုံးခွဲမှု့က ဈေးအိမ်သာ မဟုတ်ပါဘူး ။ )
ဒီအမှားကို ထောက်ပြချင်လို့ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဗုံးခွဲသူ မိပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ့လို ရွာသူားတွေကို ရှယ်ချင်လို့ ချ ရေးရင်းကနေ သတိထားမိလာလို့ အပေါ်က မှတ်ချက်လေးတော့ ပူးတွဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြန်ဖတ်ရင်းကဘဲ နောက်ကွဲလွဲစွာ ရေးထားတာ တွေ့ပြန်ပြီ။ တစ်ပုဒ်မှာ ကတုံး(ခ) ဇော်သက်အောင် ၊
နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကျ ကတုံး(ခ) ဇော်သက်နောင် ဖြစ်နေပြန်ပြီ။ သတင်းစာ ဆရာတို့ရေ…….. :shock:
အမှန်က အမြွှာညီအကို တဲ့ဗျ
အင်း သတင်းပေးတဲ့သူကလည်း တိတိကျကျမသိပဲနဲ့နော်
ကိုရေးတဲ့ သတင်းကိုလည်း ကိုဘာသာကိုယ် ပြန်ပြီးဖတ်မိကြရဲ့မသိပါဘူးဗျာ…
သတင်းတွေ ပြန်မျှဝေတဲ့ ကိုထူးဆန်းရေး ကျေးဇူးပါဗျာ…
အင်းသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တော့ အနည်းအကျဉ်းပေးလိုက်ပါပြီ တစ်ချို့က ဒါတောင် သေချာမလုပ်ကြဘူး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်များကို ဗုံးခွဲသူ မိပြီ ဆိုတဲ့ သတင်း ဖတ်လိုက်ရသလိုပါဘဲ။
ဘယ်သူမှ မဟုတ်ဘူးဗျာ။လုပ်ကြံဖန်တီးပြီး ထိုးချနေတာ။ဗုံးဖောက်သူဟာ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ဘဲ။စစ်ခွေးတွေ….
အမှန်မှာဆို ဒီသတင်းက ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ နင်လားငါလား ခေါင်းကြီးသတင်းတစ်ပုဒ်ပါ
( ဟိုဂျာနယ်ဆိုဒ်မှာပါ ဒီဂျာနယ်ဆိုဒ်မှာပါပြီး နိုင်ငံတော်အဆင့် သတင်းသဘော မပါလာတာလေးပါ )
ဒီသတင်းကို နိုင်ငံတော်အဆင့် ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းပုံစံနဲ့ မထွက်လာသေးသ၍
ခင်ဗျားတို့လည်း ဖင်မယားကြဘို့ ကျုပ်ကဘဲ ဖင်ယားပြီးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်
ခင်ဗျားတို့တွေ ချဉ်ပေါင်ပင်တောင် မစိုက်တတ်ဘဲနဲ့ သစ်တောထိမ်းသိမ်းဘို့ စာတမ်းရှည်ရေးနေတဲ့
သတ္တဝါတွေဆိုတာ ကျုပ်က ကောင်းကောင်းသိပြီးဘီ
ဂျက်ကီချီးပေ ဖင်ယားပီး မေတ္တာရပ်ခံတာကို အားလုံးပဲ ဖင်ယားပီး ထောက်ခံ ကြနော်..
အဲ လေ ထောက်ခံ ပီး ဖင်မယားကြပါနဲ့လို့ ဟီးး မီးး ပါဘူးနော်…
ဘယ်သူကခွဲခိုင်းတာလဲ၊ ဘာကြောင့်ခွဲတာလဲဆိုတာလဲ မေးမထားဘူးနော်
တစ်ချိန်က ဗုံးခွဲပါတယ်လို့ အတင်းရိုက်နှက်ဝန်ခံခိုင်းပြီး ထောင်ချခံရသူတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေပါအုံးမယ်
ကေအင်ယူက သူတို့ပါလို့ပြောတာတောင် မလွှတ်ဘဲ နေက်ပိုင်း ပေါ်တာထဲထည့်လိုက်လို့ ခြေထောက်
တစ်ဘက်ဖြတ်လိုက်ရလူ မျိုး မဖြစ်စေကြောင်း ဆုတောင်းပေးပါရဲ့